Shirkii Xildhibaanada Beelaha Habargedir ee Muqadishu maxaa ka soo baxay? - Muqdisho Online
Home Wararka Shirkii Xildhibaanada Beelaha Habargedir ee Muqadishu maxaa ka soo baxay?
Shirkii Xildhibaanada Beelaha Habargedir ee Muqadishu maxaa ka soo baxay?
Waxaa tobobaadkii na soo naafay ka socday magaalada Muqadishu kulmo kala duwan oo ay isugu imaanayeen Xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa muxaafidka ee ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya kana soo jeeda Beesha Habargedir, shirkaas ayaa waxa sidoo kale ku wehliyay xildhibaanada qaar ka mida wasiiro ka tirsan Xukuumada Kheyre. Dhanka kale waxa jiray xildhibaano dalka dibadiisa ku maqan kuwaas oo qadka taleefanka uga soo qayb galay kulamadaas ama xildhibaano kale soo wakiishay.
Kulamadaas ayaa waxa looga arinsanayay qaabka wax looga qaban lahaa xaalada cakiran ee ka jirta Dowlad Goboleedka Galmudug. Kulankii ugu danbeeyay kulamadaas ayaa waxa lagu qabtay guriga Sanatar Cabdi Cawaale Qeybdiid. Kulamadaas oo ayan wali ka soo bixin warbixin dhameystiran, walina loo balansan yahay in dib la isugu noqdo, ayaa waxa la isla gartay in Doorasho cusub loo qabto Dowlad Goboleedka Galmudug.
Sida loo xaqiijiyay MOL, go’aankaan ayaa waxa dabada ka riixayo shaqsiyaad ay colaad kala dhaxeeyso Madaxweyne Axmad Ducaale Xaaf halka xildhibaanada kale ay u arkaan Ahlu Sunna Wajameeca in ay caqab ku tahay mustabalkooda siyaasadeed. Gudiga loo xilsaaray goobta doorashada ka dhaceyso iyo waqtiga ay dhaceyso ayaa waxa ka mida Xildhibaan Mahad Salaad oo loo xilsaaray in uu ka soo dhaadhiciyo Ahlu Sunna in ay ogolaato doorashada, halka Axmad Qoor Qoor uu balan qaaday in magaalad Cadaado loo diyaarinayo in doorashada lagu qabto.
Dhanka kale waxa hami weyn ku jiraan Cabdiraxman Odowaa oo rabo in isaga loogu faataxeeyo in uu noqdo Madaxweynaha cusub ee Galmudug. Sidoo kale Sanator Cabdi Qaybdiid ayaa dhankiisa doonayo in uu mustaqbalka saameyn ku yeesho xildhibaanada laga soo dooranayo degaanka Galmudug sidaas darteed ayuu u arkaa Axmad Ducaale Xaaf in uu caqabad ku yahay rabitaankiisa Siyaasadeed.
Mid ka mida xildhibaanada goobjooga ka ahaa shirarkaas ayaa MOL u sheegay in ayan jirin talo laga siman yahay oo aan ahayn ceyrinta Xeef lakiin ma jiro talo kale oo la isku waafaqsan yahay. Waxa uu yiri “… madaxda habeenadaan shiraysay waa dad kala mab’da ah oo ku kala jira qaanado kala duwan dhamaantoodna ka amar qaato dada aan joogin goobta shirka… inkastoo Xaaf iyo Ahlu Sunna laga soo horjeedo hadana heshiis laguma aha cida badali doonta iyo hogaanka imaan doono”.
Maamulka uu hogaanka u hayo MW Xaaf oo la socda shirarka ka socda magaalada Muqadishu ayaa shir jaraa’id ku qabtay shalay magaalada Dhuusamreeb kaas oo ay ku sheegeen in wax doorasho la yiraahdo ayan dhici doonin, maamulka hadda jiraana ay u hartay mudo sadax sano oo cusub. Waxa ay sheegeen in go’aankaas uu ka mid ah ahaa qodobadii ka soo baxay shirkii dib-u-heshiisiinta ee lagu qabtay dalka Jabuuti.
Previous article(Daawo Video) Ciidankii ugu horreeyay oo ka soo baxay furimaha dagaalka iyo kuwa kale oo la filayo
Next articleCiidanka Booliska Gobolka Banaadir oo si ula kac ah u dilay Cabdiwaaxid Jibriil Afrax